आचार्यको मोह पुरस्कृत | We Nepali
नेपालको समय: ०७:२१ | UK Time: 01:36
आचार्यको मोह पुरस्कृत
२०७१ फागुन २५ गते २३:३६
बेलायतवासी साहित्यकार विकलचन्द्र आचार्य
लन्डन । बेलायतवासी साहित्यकार विकलचन्द्र आचार्यको चौंथो कृति ‘मोह’ ले २०७० सालको हरि उत्कृष्ट प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । गोरखा बजारमा आयोजित एक समारोहबीच उक्त पुरस्कार आचार्यका पिता दीर्घ शिक्षासेवी रामचन्द्र आचार्यलाई वरिष्ठ समालोचक तथा साहित्यकार डा. वासुदेव त्रिपाठीले प्रदान गरे ।
उक्त पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ राजेश्वर देवकोटाले आफ्ना बाबु हरिप्रसाद देवकोटाको स्मृतिमा स्थापना गरेका हुन् । गोरखा जिल्लावासी साहित्यकारलाई प्रोत्साहित गर्न उक्त पुरस्कार स्थापना गरिएको जनाइएको छ ।
गोरखा बजारमा जन्मेका विकल आचार्य दुई दशक भन्दा बढि समयदेखि बेलायतमा बस्दै आएका छन् । उनको पुरस्कृत मोह उपन्यासले परदेशी भूमिमा नेपालीले गर्नुपरेका संघर्ष, सफलता र असफलता, वाध्यता, विवशता र राष्ट्रको मायाले घनिभूत भइ जीवन बिताएका अनेकौं आयाम सहितका विषयवस्तु पस्केको छ ।
साहित्यकार प्रदीप नेपालको विचारमा जीवनका भिन्नभिन्न आयाम मोह उपन्यासमा समेटिएका छन् । ‘त्यहां मायामोह मात्र छैन् । त्यहां पीडा छ, कष्ट छ, नोस्टाल्जिया र प्रतिक्रियाविहीनता पनि छ । नयां लेखकको यो एउटा सुन्दर उपन्यास हो’, नेपालको विश्लेषण छ ।
कवि तथा नाटककार गोपी सापकोटाले मोहलाई नेपाली डायस्पोरा जीवनको ऐना भनि संज्ञा दिएका छन् भने समालोचक डा. यादव लामिछानेले मोहमा आप्रवासी जीवनका पीडा, दुःख र मातृभूमिको सम्झनाले उत्पन्न गराएको न्यास्रोपनको अभिव्यक्ति सशक्त रुपमा प्रकट भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
आचार्यका यसअघि लण्डनमा मुटु दुख्दा, कोरोनरी मुटुरोग, बेलायती आंगनमा गोर्खाली सुवास प्रकाशित भइसकेका छन् ।